Hadallada Xasan Sheekh iyo C/Weli ee kadib dilkii Xayd oo muujiyey hal arrin |
Hadallada Xasan Sheekh iyo C/Weli ee kadib dilkii Xayd oo muujiyey hal arrin
Muqdisho (SomaliMedia) –Madaxeweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra’iisul wasaare Cabdi Weli, ayaa si quus ay ka muuqato uga hadlay dilkii maanta magaaladda Muqdisho loogu geystay Allaha u naxariistee marxuum xildhibaan Maxamed Maxamuud (Xayd) oo ka mid ahaa Xlidhibaanadda Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya iyo askarigii ilaalada ahaa ee la socday.
Hadallada labada nin ee ugu sarreysa DF, ayaa waxaa ka muuqatay inaysan awood u lahayn inay dib u habeeyeen hay’adaha amniga dalka ayna ka hortagaan weerarada Al-Shaabaab, taa bedelkeedna ay hadal un ku siman yihiin.
Madaxweynaha ayaa tacsi u diray eheladdii, qaraabadii iyo dhammaan umadda Soomaaliyeed ee uu ka geeriday Allaah naxariisee Marxuum Maxamed Maxamuud (Xayd) iyo askarigii la socday.
“Hey’adaha Ammaanka ee ay shaqadoodu tahay inay ka hortagaan falkaan oo ay kooxaha nabad diidku sameyeen nooca ay doonaanba ha ahaadeene waa inay sababtu soo cadeeyaan. Hey’adaha amniga waa inay sameyaan baaritaan natiijadiisu aan ka sugi doono. Shacabka Soomaaliyeed uma dulqaadan karo sii socoshada dilalka qorsheysan ee kooxaha naf lacaariga ah sameynayaan” ayuu yir madaxweynaha.
Sidoo kale Cabdi Weli ayaa yiri “Waxaan sii xoojin doonnaa tallaabooyinka aanu ku beegsanayno dambiilayaasha caadeystay daadinta dhiigga dadkeenna sharafta leh xiligan aan ku jirno bisha barakeysan ee Ramadan, waxaan ugu baaqayaa waaxaha amniga ee arrintan baaritaanka ka wada in ay si deg-deg ah gacanta ugu soo dhigaan kuwii geystay falkan foosha xun, isla markaana la horgeeyo cadaaladda”
Xasan Sheekh iyo Cabdi Weli ayaa u muuqda kuwo iska indha tiraya xaqiiqda ah in Al-Shabaab ay hadda u muuqato inay awood u leedahay inay wixii ay doonto ka sameyso Muqdisho, isaga oo eedeynaya hay’ado marar hore lagu war-geliyey inaan mushahar la siin, madaxdoodana musuq maasuq ay wadaan.
Xasan Sheekh iyo Cabdi Weli ayaa mar kale ku celiyey in ciidanka iyo shacabka Soomaaliyeed ay diyaar ayey u yihiin inay Dalka iyo Diinta difaacdaan.
Horey ayaa loo weeraray Villa Somalia iyo baarlamanka, ayada oo madaxda DF ay sheegeen in sharciga la marin doono kuwii geysatay hase yeeshee weli waa laga sugayaa. Madaxweyne Xasan Sheekh, ayaa wax-qabadkiisu noqday kaliya hadal, halka ra’iisul wasaare Cabdi Weli uu shaqo ka dhigtay isku dirka beelaha Soomaaliyeed iyo colaad hurin.